Momba anay - Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd.
Manaraka ny "fifantohana amin'ny fampiharana ultrasonika, am-pinoana mba handresy ny mpanjifa, hahazoana ny lazan'ny kalitao" tanjona fampandrosoana, lasa mpamatsy mpiorina manerantany ireo singa fototra ultrasonic, amin'ny alàlan'ny haavo matihanina sy ny ezaka tsy voatanisa, vokatra manara-penitra ho an'ny mpanjifa ao amin'ny fampandrosoana ny indostria hamoronana fiverenana sarobidy kokoa.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. dia miasa amin'ny fanondranana ultrason transducers sy ny milina fantsom-pandrefesana manerantany manerana ny firenena 40 mahery.
Amin'ny maha-mpanondrana singa ultrasonia matihanina lehibe azy, Qsonic dia manana traikefa momba ny vokatra sy fahalalana mandroso, noho izany dia matoky izahay fa afaka mamaly ny filanao. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatray dia tena mandanjalanja amin'ny vidiny sy ny kalitao avo lenta, mba hahafahan'ny mpanjifanay mitazona tombony amin'ny fifaninanana.
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, manana ekipa tsara izahay. Tsy ny vokatra mahazatra ihany no atolotray, fa koa ny entana namboarina namboarina mifototra amin'ny sary na santionany amin'ny antsipiriany.
QRsonic dia manome serivisy OEM maro ho an'ny mpanjifany. Ny sary famantarana ny mpanjifa dia azo soratana amin'ny transducer ultrasonic sy ny fitaovana ultrasonic.
Manantena fatratra ny fotoana hanompoana anao izahay ary ho tonga mpiara-miasa aminao ato ho ato. Andao hiara-hiasa isika hamorona fiverenana sarobidy kokoa ho an'ny lanjan'ny fampandrosoana ny indostria miaraka amin'ny vokatra kalitao.